Nayakhabar.com: ‘श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि मलेसिया गएकी मन्जु यसरी भर्इृन रातारात मालामाल ?
‘श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि मलेसिया गएकी मन्जु यसरी भर्इृन रातारात मालामाल ?
काठमाडौं । श्रीमान् बिना जीवन चलाउन महिलालाई मुस्कील हुन्छ भन्ने नेपाली समाजमा परम्परागत सोचाई छ । तर, श्रीमान्संग छुट्टीएर पनि प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको गतिलो पात्र बनेकी छिन् पूर्वी नेपालको दोपाने ७, उदयपुरकी मन्जु रानाभाट । २० बर्ष अघि गाउँकै छत्रसिंह रानाभाटसंग प्रेम विवाह गरेकी मन्जुको सपना छत्रसिंहसंगै जीवन बिताउने थियो । सुरुमा रानाभाट दम्पतीको जीवन सुखमय नै थियो । तर, जव कान्छो छोरा जन्मियो तव मञ्जुका सुरु भए दुःखका दिन ।
१२ दिनकी सुत्केरी श्रीमतीलाई रक्सीको झोंकमा कुटेर उनका श्रीमानले आफ्नो राक्षसीपन देखाए । दुई बर्षसम्म उनले श्रीमानको चरम यातना सहेरै बसिन् ।तर, अति नै भएपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो र अन्ततः सम्बन्ध बिच्छेदमा गएर जीवनको एउटा अध्याय नै समाप्त भयो । एक किसिमले उनको भविष्यमा कालो बादल मडारियो ।
श्रीमानसँग अलग भएकी उनी माइतीको शरणमा गइन् । ६ महिनापछि दाइभाउजुको असह्य व्यहारबाट आजित उनी केही गर्नुपर्छ भनेर सदरमुकाम गाइघाट छिरिन् अनि सुरु भए उनका संघर्षमा दिन । २ बर्षसम्म ज्यामी काम गरेर आफू र दुई छोराको जीवन गुजारेको उनी बताउँछिन ।